‘गोपी’ मैले लेख्न चाहेको जस्तो फिल्म होः सामीप्यराज तिमल्सिना « THE CINEMA TIMES
दर्शकले यूएइको एयरलाइन्समा नेपाली सिनेमा ‘हरी’ हेर्न पाउने !
चैत्र २८ लाई प्रदर्शन मिति पक्का गर्दै ‘प्रेमगीत ३’को निर्माण घोषणा !
फ्रान्सको आइफेल टावर पुगेर रोमान्टिक बने वर्षा र संजोग !
हरर सिनेमा ‘कठपुतली’को फस्टलुक पोष्टर रिलिज
चीनको बक्सअफिसमा आयुष्मान स्टारर ‘अन्धाधुन’को धमकेदार कमाई !
‘कुटुमा कुटु’लाई युट्युबमा सर्वाधिक १० करोड भ्युज !
‘विर विक्रम २’को पोष्टरमा वर्षासँग रोमान्टिक पल र नाजीर
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौं – लेखक तथा समीक्षक सामीप्यराज तिमल्सिना पछिल्लो समय सिने पत्रकारका रुपमा भन्दा बढी स्किृप्ट राइटरका रुपमा चिनिन्छन् । एकपछि अर्को गर्दै सिनेमा लेखनमा जमेका तिमल्सिनाले लेखेका प्रायः सिनेमा व्यावसायिक रुपमा हिट छन् । ‘ड्रिम्स’ ‘नोभेम्बर रेन’, ‘ए मेरो हजुर २’, लगायत दर्जनभन्दा बढी सिनेमा लेखेका तिमिल्सिनाले पछिल्लो पटक लेखेको सिनेमा ‘नाइँ नभन्नू ल ५’ ले पनि व्यावसायिक सफलता हात पारेको थियो । तिमल्सिना यतिबेला भने ‘गोपी’ का कारण चर्चामा छन् । यो सिनेमाको स्किृप्ट तिमल्सिनाले नै लेखेका हुन् ।
यो सिनेमा चर्चामा हुनुको कारण के हो भने यो सिनेमाले सामान्य विषय उठाएको छ । यसअघिका उनका सिनेमा व्यावसायिक रुपमा बढी फोकस थिए भने यो सिनेमा आफ्नो रुचीअनुसार लेखेको सामीप्यले बताउँदै आएका छन् ।
द सिनेमाटाइम्सको कुराकानीमा लेखक तिमल्सिनाले ‘गोपी’ आफ्ना लागि पनि आशालाग्दो फिल्म भएको बताए । ‘यो सिनेमा मैले लेख्न चाहेजस्तो सिनेमा हो, किनभने पहिले मैले बजारले रुचाएका सिनेमा लेख्ने गरेको थिएँ, यसमा भने आफूले रुचाएजस्तो कथा हाल्न पाएको छु’, उनले अगाडि थपे, ‘यसको अर्थ सिनेमा घरेलु दर्शकले मन नै नपराउने भन्ने होइन, तर ट्रिट अलि फरक छ, दर्शकलाई सिनेमा मन पर्छ ।’
आफूले अहिलेसम्म लेखेका सिनेमा दर्शकले रुचाए पनि शुभचिन्तकले भने ‘गोपी’ जस्ता सिनेमा लेख्न आग्रह गरिरहेको बताउँदै उहाँहरुलाई यो सिनेमा कोशेली भएको सामीप्यराजले स्पष्ट पारे ।
‘गोपीले दर्शकको मन जित्छ, बजारले जे चिज खोजिरहेको छ, त्यो कुरालाई हामीले उठाएका छौँ, गाई पाल्ने किसानको कथा भए पनि देशप्रेमको कथा छ,’ सामीप्यले थपे, ‘विषयका हिसाबले गाई पाल्ने किसानको विषय छानिएको छ, यद्यपि अडियन्सलाई देशमै केही गर्न खोज्ने युवाको कथाले छुन्छ, मातृभूमि र आमासमान मान्ने गाईको कथा हामीले उठाएको हौँ ।’
सिनेमाले पशु र मान्छेबीचको स्नेहलाई पनि देखाएको छ । सिनेमामा गोपीको भूमिकामा विपिन कार्कीले अभिनय गरेका छन् ।
दीपेन्द्र लामाको कथा तथा निर्देशन रहेको यो सिनेमालाई आरोही केसीले निर्माण गरेकी हुन् भने श्रीधर पौडेल कार्यकारी निर्माता छन् । सिनेमामा विपिनसँगै सुरक्षा पन्त, वर्षा राउत, अंकित खड्का, प्रकाश घिमिरे, भोलाराज सापकोटा लगायतका कलाकारले पनि मुख्य भूमिका निभाएका छन् ।
माघ १८ गतेदेखि नेपालभर रिलिज हुन लागेको यो सिनेमाले राष्ट्रिय मुद्दा उठाएको भन्दै केही मन्त्री तथा नेताले पनि चासो देखाएका छन् ।
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौं – अव दैनिक विदेश जाने र आउने नेपालीले यात्राको क्रममा प्लेनमा
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौं – निर्माता सन्तोष सेनले सफल सिनेमा ‘प्रेमगीत’को तेस्रो सिरिज ‘प्रेमगीत ३’को
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौं – ‘भ्यालेनटाइन्स डे’को अवसर पारेर फागुन २ गते विवाह बन्धनमा बाधिएका
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौं – हरर कथामा निर्माण भएको नेपाली सिनेमा ‘कठपुतली’को फस्टलुक पोष्टर सार्वजनिक
चर्चामा आमाछोरी झरना एण्ड सुहाना
अनमोलको ‘स्टारडम’ सधै उस्तै !
चैत्र २८ लाई प्रदर्शन मिति पक्का गर्दै 'प्रेमगीत ३'को निर्माण घोषणा !